Guriga - Beerta cagaha Hinds
Nagala soo xidhiidh: 704-992-1424 (Huntersville) ama 828-274-0570 (Asheville)
Taariikhda: Sheekada Puddin
Barnaamijka Fududeynta Daaweynta
Dhaawaca Maskaxda oo daboolaya
Barnaamijka Maalinta Virtual
Siyaabaha Looga Qayb Gali karo
Iskaa wax u qabso iyo intern
HADDA Aqbalaadda CODSIGA
BARNAAMIJKEENA MAALINTA MAALINTA AH Codso halkan!
U heellan u adeegidda dadka la nool dhaawaca maskaxda.
Hadafkayagu waa inaan sare u qaadno awoodda dhaawaca ka dib ee dadka la nool dhaawaca maskaxda iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo isku dhafan, gaar ah oo dhammaystiran; u ogolaanaysa xubnaheena in ay raacaan waxqabadyo macno leh anagoo horumarinayna dareenka lahaanshaha guriga iyo bulshada ku xeeran. Waxaan ku dhamayn doonaa hammigan annagoo adeegsanayna barnaamijyo gaar ah, oo qof-ku-dub-dhexaad u ah, baxnaaninta ka dib, barnaamijyo bulshada ku salaysan.
Fiiri Warbixinta Sannadlaha ah ee 2021
Barnaamijyada Maalinta iyo Deegaanka
Maalinta Beerta Cagaha Hinds's iyo barnaamijyada deegaanka ayaa ah beddelka qaabkii daawaynta dhaqameed ee loogu talagalay dadka qaba dhaawaca maskaxda oo loo beddelo qaab soo dhawaynaya hab caafimaad oo dhammaystiran iyo fayoobi, awoodna u siinaysa xubnaha xagga shaqada iyo macnaha nolosha dhaawaca ka dib. Waxaa abuuray, oo loogu talagalay, dadka la nool xubnaha dhaawaca maskaxda si firfircoon uga qaybqaataan dhammaan kaabayaasha barnaamijka.
Our Barnaamijyada Maalinta waxay diiradda saarayaan sidii ay xubin kasta uga caawin lahaayeen inay helaan "caadi cusub" iyada oo loo marayo goobta iyo barnaamijyada bulshada ku salaysan ee firfircoon ee diiradda saaraya garashada, hal-abuurka, shucuurta, jireed, bulsho iyo waxqabadyo xirfadeed ka hor. Barnaamijyada maalinlaha ah waxay ku yaalaan labadaba Huntersville iyo Asheville, Waqooyiga Carolina.
Goobta Puddin waa guri casri ah oo 6 sariirood leh oo qoyska lagu xanaaneeyo oo loogu talagalay dadka waaweyn ee qaba dhaawacyada maskaxda ee dhaawacan. Gurigan waxaa loogu talagalay oo loogu talagalay in lagu qabto baahiyaha kakan ee shakhsiyaadka u baahan kaalmada dhexdhexaadka ah ilaa ugu badan ee hawlahooda nolol maalmeedka (ADLs). Goobta Puddin waxay ku taal xeradayada Huntersville.
Hart Cottage waa guri nool oo 3-sariir ah oo la taageeray oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha dadka qaangaarka ah ee qaba dhaawacyada maskaxda kuwaas oo ka madax bannaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada nolol maalmeedka (ADLs), haddana u baahan gargaar khafiif ah ama dhexdhexaad ah iyo kormeer si ay u gutaan hawlaha oo ay ugu badbaadaan. Hart Cottage waxay ku taal xeradayada Huntersville.
Xubnaha barnaamijka deegaanka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka qaybgalaan, la falgalaan oo ay ka qayb qaataan hawlaha socda ee barnaamijyada maalinta sidoo kale.
Caawintaada Ayaa Loo Baahan Yahay
Deeq keliya waxay samaysaa adduunyo kala duwan.
Taageeradaada billaha ah waxay naga caawin doontaa inaan sii wadno bixinta barnaamijyo gaar ah oo cusub oo loogu talagalay dadka waaweyn ee qaba dhaawacyada maskaxda iyo qoysaskooda
Riix HALKAN si aad u barato sida loo taageero Beerta cagaha Hinds'!
Waxa Dadku Sheegayaan
"Markii ugu horeysay ee aan dhaawaca soo gaaray waxaan ku soo wareegay goobo kala duwan oo lagu baxnaaniyo, waxaan ku waalanaa aduunka oo kaliya waxaan rabay inaan guriga aado, ugu dambeyntii waa inaad aqbashaa dhaawacaaga iyo halgankaaga, waxaan bartay dulqaadka dadka igu xeeran iyo naftayda."
"Anigu ma awoodo inaan sameeyo waxyaalihii aan awoodi jiray, laakiin waxaan helayaa wadooyin cusub iyo meelayn si aan awood ugu yeesho waxyaalahaas"
"Waxaan saaxiibo badan ku yeeshay Beerta, ka qaybgalayaasha kale dhamaantood waa saaxiibtinimo, waana ku raaxeeyaa la joogitaanka iyaga. Waxaan sidoo kale jeclahay la macaamilka shaqaalaha. Waxaan leenahay madadaalo badan si wadajir ah."
"Kani ma samayn karo kaligay, laakiin aniga oo keliya ayaa tan samayn kara. Oo, ka ag-dhawaanshaha dadka aniga oo kale ah waxay i bartay dulqaad si aan indhahayga u furo oo aan dadka kale u arko."
"Barnaamijka maalinta ayaa nolosheyda si weyn uga qayb qaatay. Waxay isiiyeen xoriyad ku filan oo aan ku sameeyo oo aan wax ka barto khaladaadkayga."
"Habkaaga bini'aadantinimo ee dhisidda ixtiraamka, kalsoonida iyo ixtiraamka wadaagga ah ee u dhexeeya xubnaha, shaqaalaha iyo waalidiinta ayaa iftiiminaya mar kasta oo aan booqanno."
"Si aad ah ayay u kortay sannadahan la soo dhaafay siyaabo badan. Waxay ku leedahay bulshada Hinds Feet Farm saaxiibo iyo waayo-aragnimo ka caawiya inay horumarto, koraan oo ay hesho nolol farxad leh."
La kulan Huntersville Intern, Maggie!
Waxaa laga yaabaa 1, 2022
La kulan Asheville Intern, Alex!
La kulan Tababarkayaga Isbahaysiga Caafimaadka, Natalia!
La kulan barnaamijkayaga Maalinta Huntersville Intern, Lauren!
SUBCRIBE LIISKA EMAILKAyaga!
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Hinds Feet Farm. Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen Naqshadeynta by Farqi Abuuray.
Hinds' Feet Farm waa urur aan faa'iido doon ahayn 501 (c) 3.